आम जनचाहना कुलमानलाई नै दोहोर्‍याउन पर्ने – Khabar PatrikaNp
आम जनचाहना कुलमानलाई नै दोहोर्‍याउन पर्ने
August 23, 2020 252
काठमाडौं । काठमाडौंको १४ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य र देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियन्ता कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको कार्यकाल यहिँ भदौ २९ गते सकिँदैछ। आम जनचाहना कुलमानलाई नै दोहोर्‍याउन पर्ने छ।
स्वयम् विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, ट्रेड युनियन पनि घिसिङलाई पुन: जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर निर्णय भने नेकपा नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारको हातमा छ। उर्जा मन्त्री छन् पूर्वमाओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन। हुनत कुलमानलाई तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तर अहिले मन्त्री पुन कुलमानको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुन आफैं छन्। प्राधिकरणको हरेक नीतिगत निर्णयमा उनको भूमिका छ। कुलमान सफल हुनुमा उनको पनि केही योगदान छ। तर चर्चा घिसिङकै भएपछि पुन असन्तुष्ट भएका हुन्। कुलमान मिडियाप्रेमी कर्मचारी हुन्। जसका कारण उनको चर्चा अझै बढी हुने नै भयो। प्राधिकरणको सुधारमा सिंगै टिमको योगदान रहे पनि व्यक्ति केन्द्रित चर्चा हुँदा मन्त्री छायामा परेका छन्।
जुन पुनलाई मन परेको छैन। लोकप्रियता र कार्यसम्पादनको आधारमा घिसिङ दोहोरिन सक्छन्। तर, उनको मिडियाप्रेम प्रति मन्त्री असन्तुष्ट हुँदा दोहोरिने सम्भावना कम छ। यहिँ कुरा थाहा पाएका नेकपाका नेताहरु आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन तछाड मछाड गरेर लागिपरेका छन्। खासगरी पूर्वएमालेहरु सक्रिय भएका छन्। जो पहिल्यैदेखि कुलमानलाई राम्रो मान्दैनन्। एमाले छँदा उपमहासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कुलमानलाई असफल पार्न पार्टी नै संसथागत रुपमा लागेको थियो।
भारतीय एजेण्टको आरोप
नेकपा नेता कार्यकर्ता अहिले कुलमानलाई भारतीय एजेण्ट भनेर राष्ट्रवादी कार्ड खेलिरहेका छन्। भारतसँग राम्रो समन्वय गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका कुलमानलाई बदनाम गर्ने अन्य कुनै खोट नभएपछि नेकपाका केही नेताहरु भारतीय एजेण्ट भनेर बदनाम गराउन लागिपरेका हुन्। र मन्त्रीलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
उनीहरु कुलमानलाई भारतीय एजेण्ट देखाउन विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेका छन्। कुलमानको भारतीय दूतावाससँग पनि सम्बन्ध रहेको उनीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। यिनै कुरा गरेर कुलमानलाई भारतीय एजेण्ट देखाउन लागिपरेका छन्। भारतीय दूतावासका अधिकारीले भने कुलमानसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको र उनको सिधै भारतीय उर्जा मन्त्रालयसँग विद्युत आपूर्तिका लागि सहकार्य हुने गरेको स्पष्ट पारेको छ।
जसले डुबाए, उसैलाई ल्याउने कसरत
नेकपा नेता कार्यकर्ता तथा विचौलियाहरुले घिसिङको सट्टामा पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई ल्याउने कसरतमा लागेका छन्। यसका लागि काफ्लेले पैसाको खोलो बगाएको बुझिएको छ। पैसाको बलमा पदमा आउन उनले उच्च नेतृत्वसम्म समेत लबिङ गरेका छन्। मुकेश काफ्ले तिनै व्यक्ति हुन जसले प्राधिकरणलाई डुबाएका थिए।
उनले गरेका गलत कामलाई सुधार्न कुलमानलाई समय लागेको थियो। काफ्लेले नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने ठेक्कामा बदमासी गरेका थिए। त्यतिमात्रै उनी कुलमानलाई असफल पार्न लागिपरेका थिए। पटक पटक लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर जनमानसमा भ्रम पैदा गर्न खोजेका थिए। तर सकेनन्।
कतिसम्म भने उनले २०७३ फागुनमा लोडसेडिङ अन्त्य भए सार्वजनिक पद धारण नगर्ने घोषणा गरेका थिए। कुलमानले अन्त्य गरेर देखाए। त्यतिबेला सार्वजनिक पद धारणा नगर्ने आफ्नै घोषणालाई बिर्सिएर उनी कार्यकारी निर्देशकको दौडमा प्रबल दावेदारमा रुपमा प्रस्ततु भइरहेका छन्। नैतिक रुपमा पनि च्युत काफ्लेलाई नेकपाको एक समूहले पैसाको बलमा बोकेको छ।
र काम गरेर देखाउने इमान्दार कर्मचारीलाई बदनाम गरेर लखेट्ने प्रयत्न भइरहेको छ। विजुली माफियाहरु पनि यसमा संलग्न छन्। विचौलिया र राजनीतिक नेताहरु घिसिङलाई बद्नाम गर्न हात धोएर लागे पनि सामाजिक सन्जालमा घिसिङलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग दिनदिनै बढ्दो छ।
मन्त्री पुनकै अगाडि आधिकारिक ट्रेड युनियनले घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि काम गर्न दिन माग गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्रधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले ४ वर्षमा घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ठूलो प्रगति गरेकाले फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। घिसिङविरुद्ध जतिसुकै चलखेल भए पनि जनताले विश्वास नगर्ने उनको भनाई छ।
‘हामी कर्मचारीलाई ४ वर्षअघि प्राधिकरणको ड्रेस लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो। अहिले म प्राधिकरणको कर्मचारी हुँ भनेर छाती फुलाउने अवस्था छ। यो कुलमान घिसिङकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’ सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले पनि १४ घण्टाको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएकाले घिसिङको टिमलाई निरन्तरता दिनपर्ने माग गरे। उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी पनि घिसिङ नै दोहोरिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्।
Prevखुशीको खबर : अमेरिकामा बन्यो ‘टी थ्री एक्स’ मल्हम कोरोना संक्रमण रोक्ने
Nextतीजको बेलामै भारतको चेन्नईमा एक नेपाली चेलीले देहत्याग
भर्खर विदेश वाट आएका श्रीमानले २४ वर्षकी श्रीमतिको ज्यान लिए..(भिडियो)
सुजाता कोइरालाले पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिमा लड्ने घोषणा
एक कम्युनिस्ट नेताको घरबाट १२ हजार किलो सुन र बैंकमा ४१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खुलासा
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (31115)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30334)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28270)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25649)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23431)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21474)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15901)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15309)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (14017)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13557)
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको बटमलाइन -अहिल्यै हट्दिनँ, अन्तरिम कमिटीमा बहुमत देखाउन मिल्दैन
अकलादेवी मन्दिर, जहाँ कसैले नहल्लाइकन पनि घण्ट आफैं हल्लिन्छ !
नागरिकता नुहँदा बनेन भूकम्पले भत्किएको घर : छाप्रोमै बास
आज आइतबार,सुर्य देबको दर्शन गर्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस तपाइको मनोकामामना पुरा हुनेछ ! जय सुर्य देब !!!
एकाबिहानै मनकामना मन्दिरको दर्शन सँगै आज वि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते आईतबारको राशिफल पढ्नुहोस,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस